ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Zhejiang Jiuerjiu Chemicals Co. , Ltd.
ကုမ္ပဏီ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစနစ်၏အလုံးစုံဖြန့်ကျက်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့်အညီ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လ ၂ ရက်နံနက်တွင်ကုမ္ပဏီသည်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်“ Long Time Management Reform Initiation Conference” ကိုရုံးခန်း၏ဒုတိယထပ်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဥက္ကchairman္ဌဖြစ်သူ Chen Jincai နှင့်ဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Wang Xiaoli Ms. Tang Xiangyang၊ ထုတ်လုပ်မှုဒုဥက္ကPresident္ဌ၊ Chengdu Mindao Enterprise Management Consulting Co. , Ltd. ကိုတည်ထောင်သူ Mr. Wang Ming၊ ခေါင်းဆောင် Liu Jing၊ Mindao စီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့် Mindao စီမံကိန်းအဖွဲ့၏အတိုင်ပင်ခံနည်းပြ Mr. He Zongkun တို့အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီ၏အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအထက်မှဤအစည်းအဝေးသို့စုစုပေါင်း ၃၇ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ မန်နေဂျာမန်နေဂျာ Wang Chao က ဦး ဆောင်သည်။ ဝယ်ယူရေးဌာန။
ပထမ ဦး စွာ Mindao စီမံကိန်း၏ခေါင်းဆောင် Mr. Liu သည်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ မစ္စတာလျူကအချိန်အတိုင်းအတာလေးခုမှကုမ္ပဏီ၏ပြောင်းလဲမှု၏အဓိပ္ပာယ်နှင့် ဦး တည်ချက်ကိုရှင်းပြခဲ့သည်။
၁။ ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲရသလဲစက်ရုံသည်ဆက်လက်လည်ပတ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနေရာရရှိနိုင်သည်။ ၀ န်ထမ်းများသည်သူတို့၏စင်မြင့်ပေါ် အခြေခံ၍ သူတို့၏တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
အပြောင်းအလဲဆိုတာဘာလဲ။ အယူအဆ၊ အပြုအမူနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပြောင်းလဲခြင်း။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုစံချိန်စံညွှန်းမီ၊
၃။ ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲ - အဆုံးသို့ပြောင်းလဲမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် Mindao ၏ ၇ ဆင့်ပါနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။
အပြောင်းအလဲ၏နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း - နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း ၅ ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမှန်ကန်သောပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အထိရောက်ဆုံးတိုးတက်မှုရရှိရန်ဖြစ်သည်။
Mindao ကုမ္ပဏီမှဆရာ ၀ န်မင်းကမိန့်ခွန်းပြောကြားသည် - အကယ်၍ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်ပင်လျှင်သန်စွမ်းလို။ ရှေ့ဆက်တိုးတက်ရန်ဆန္ဒရှိပါကရှေ့သို့တိုးတက်ရန်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုသာရှိသည်။ ရပ်တန့်သွားလျှင်၎င်းကိုသမိုင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်စျေးကွက်တို့ကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ဖျက်သိမ်း! ပျော်ရွှင်မှုကိုကလေးများသို့မဟုတ်အချို့သူများအတွက်အမြဲလျာထားသည်။ သင်ကအားကောင်းတဲ့၊ အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်။
“ The Great Qin Empire-Shang Yang Reform” ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားမှတဆင့်မစ္စတာဝမ် Ming ကအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီ၏အသွင်ပြောင်းမှု၏အရေးကြီးပုံကိုပြောကြားခဲ့သည်။
Shangyang Reform သည်ရှေးခေတ်တရုတ်နိုင်ငံ၏အအောင်မြင်ဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်ရှန်ယန်သေဆုံးခြင်းကြောင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းမခံရသော်လည်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် Shangyang Reform သည် Qin နိုင်ငံအားပိုမိုအားကောင်းလာစေပြီး၊ အရင်းအနှီးဖြစ်သော Qin ၏စွမ်းအားသည် Shangyang Reform ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်မကွာခဏဖြစ်သည်။ ယေဘုယျရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် Qin ၏ Shangyang Reform သည်နောင်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်ကြီးမားသောအကူအညီများပေးခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏အသွင်ပြောင်းမှုသည်ကုမ္ပဏီအားပိုမိုခိုင်မာစေရန်ဖြစ်သည်။ ချက်ချင်းကော်စျေးကွက်တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နေရာများစွာရှိသည်။ ထောင်နှင့်ချီသောမီးအိမ်များသည်နေရောင်ခြည်နှင့်မတူပါ။ နေ့ခင်းဘက်ပိုင်းတွင်မီးခိုးမြူများအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ အပြောင်းအလဲလမ်းပေါ်မှာသတ္တိရှိရှိတိုးတက်မှသာလျှင်မနက်ဖြန်မှာပိုကောင်းလာမှာပါ။
မစ္စတာချန်၏မိန့်ခွန်းအပြောင်းအလဲ၏ ဦး တည်ချက်ကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပြောင်းလဲမှုစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကိုပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့သည်။ မကြာခဏဆိုသလိုမှန်ကန်သောအရာကိုလုပ်ရန်ခက်ခဲလေ့ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်မရေမတွက်နိုင်သောမျှော်လင့်ချက်များကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သဖြင့်ခိုင်မာသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လိုအပ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီ၏အသွင်ပြောင်းခြင်းသည်အမှန်တကယ်ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများအကြားနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောယုတ္တိဗေဒဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်းများနားမလည်ပါက၎င်းသည်သူတို့၏နားလည်မှုထောင့်နှင့်အမြင့်နှင့်ပြaနာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားကိုမထည့်နိုင်ပါ။ အနာဂတ်အတွက်လည်းထည့် ၀ င်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကန့်သတ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လုပ်ရမယ့်အရာကအတားအဆီးအားလုံးကိုအခြေခံကျတဲ့ယုတ္တိဗေဒအခြေခံပေါ်မှာအခြေခံပြီးရှေ့ဆက်သွားမယ်။ မနက်ဖြန်မှာမင်းဒီနေ့မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်၊ ကုမ္ပဏီရဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလိုက်နာပြီးဒီပြောင်းလဲမှုမှာပါ ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အချိန်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီနှင့်အတူကြီးပွားတိုးတက်ပါစေ။ အတူတူအလုပ်လုပ်! အတူတူပျော်ရွှင်ပါ
နောက်ဆုံးမစ္စတာချန်၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်! တက်ရောက်သူများအားလုံးသည်“ ကုမ္ပဏီ၏ပြောင်းလဲမှုအတွက်ကတိကဝတ်ပေးစာ” ကိုပူးတွဲဖတ်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောကျိန်ဆိုမှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုတရားဝင်စတင်ခဲ့သည်။